Faah faahinta Madaafiic Culus oo Lagu weeraray Xaruunta Xalane ee Muqdisho.. - iftineducation.com
Faah faahinta Madaafiic Culus oo Lagu weeraray Xaruunta Xalane ee Muqdisho..
iftineducation.com – Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Tiro Madaafiic ah oo Xalay lagu Garaacay Xarunta ugu weyn Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga,Xaruntaas oo la yiraado Xalane oo ku taalla Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan AMISOM ayaa Xaqiijiyay in ilaa iyo Dhowr Gantaal ay ku soo dhaceen Gudaha Xarunta Ciidama AMISOM ee Xalane,waxaana ay intaa ku dareen AMISOM in aysan Madaafiicdaasi aysan geysan wax Khasaaro ah.
Wararka qaar ayaa sheegaya in madaafiicdaasi ay qasaaro dhaawacyo fudud ah u geesteyn dhowr qof oo ka mid ah shaqaalaha xaruuntaasi.
Ilaa hadda lama Oga halka laga soo tuuray Madaafiicda Xalay lagu Weeraray Xarunta Xalane ee Ciidamada AMISOM,balse Al-shabaab ayaa Weeraro Madaafiic ah dhowr jeer ku qaaday Xaruntaan Xalay Hoobiyaasha lagu Weeraray.
Naag Dalka Qadar u dhalatay oo leh ninkayga dabada ayuu ibaray
cambaha rugta daawo